Wasaaradda Caafimaadka Puntland oo maanta tababar u furtay shaqaalaheeda caafimaadka | Puntland Ministry of Health
Wasaaradda Caafimaadka Puntland oo maanta tababar u furtay shaqaalaheeda caafimaadka
Wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ayaa maanta tababar u furtay shaqaalaha caafimaadka ee sagaalka gobol ee Puntland, kuwaas oo loo tababarayo cudurrada kala ah, Shubanka, Malaariyada, Jadeecada iyo cudurrada degdegga ah ee ku dhaca Saableyda.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cabdirisaaq Xirsi Xasan ayaa u sheegay shaqaalaha caafimaadka inay tegi doonaan deegaannada cudurradan laga soo sheegay, wuxuuna sheegay in talaabadani qayb ka tahay gurmadka caafimaadka ee abaaraha.
Wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Cabdinaasir Cuuke oo furay tababarkan ayaa sheegay nuhiimada barnaamijkaan inuu yahay in shaqaalaha caafimaadka lagu tababaro sidii ay aqoon dheeraad ah ugu yeelan lahaayeen cudurrada iyo astaamahooda.
Dr. Cabdinaasir Cuuke ayaa sheegay inay kula xisaabtamidoonaan shaqaalaha caafimaadka waxyaabaha laga sugayo oo ah inay kasoo jawaabaan cudurro badan oo ku dhacay dadka abaaruhu saameeyeen, cudurradaas oo isugu jira kuwo kala duwan oo u baahan inaan la isku khaldin.
Qofkii dhaqtarnimo la biday oo Ilmihii loo keenay wuxuu doonay isaga hadlay, waa dhibaatada aan ka cararayno, markaa waxaa la idinka rabaa inaad garan kartaan cudur walba iyo macnihiisa ama sharaxaadiisa,” ayuu yidhi wasiirka caafimaadku.
Waxaa kale oo wasiirku sheegay inay shaqaalaha kula xisaabtami doonaan qaabka loo isticmaalay daawooyinka, isagoo cadeeyay in wasaaraddu bixindoonto daawo qiyaasan oo lagu jaangoyndoono muddada shaqadu halkaas ka socoto.